Magaalooyin badan oo cabasho ka keenay qaabilaada qaxootiga | Somaliska
Dhowr magaalo oo ka mid ah kamuunada Sweden ayaa cabasho ka muujiyay qaabilaada qaxootiga. Dowlada Sweden ayaa isbedal ku samaysay sharciga taasoo Laanta Socdaalka (Migrationsverket) awood u siinaysa in ay qaxootiga dajiyaan kamuunada iyaga oo aan cidna kala tashan. Horay ayay qasab ahayd in kamuunka iyo Migrationsverket ay heshiis galaan.
Kamuunka Flen ayaa warqad ay u qoreen Migrationsverket waxay ku sheegeen in aysan doonayn in ay qaabilaan qaxooti dambe. Waxaa sidoo kale cabasho midaas la mid ah soo gudbiyay kamuunka Filipstad oo sheegay in ay faraha ka bateen qaxootiga soo galaya magaaladooda.
Siyaasiyiinta maamula kamuunada ay ku soo bateen qaxootiga ayaa cabsi weyn ka qaba in taageerada xisbiga cunsuriga ah ee SD ay siyaado, iyadoo magaalada Filipstad ay SD heleen 16,9% doorashadii baarlamaanka Yurub halka Flen ay ka heleen 13,4%. Taas marka loo barbar dhigo Stockholm ayay SD heleen 5,3% oo keliya.
Qulqulka qaxootiga ka imaanaya Syria ayaa qaasatan culeys weyn saaray kamuunada qaarkood oo ku doodaya in aysan arintu ahayn in dadka guri la dajiyo oo keliya balse sidoo kale loo baahanyahay iskuulada, xanaanada, caafimaadka iyo adeegyo kale oo kamuunada yaryar aysan awoodin.
Dhinaca kale ayay kamuunada ku yaala baadiyaha Sweden u baahanyihiin qaxootiga maadaama Swedishka da’da yar ay ka guurayaan oo ay u baahanyihiin cid daryeesha waayeelkooda.
Asc dadka webka so booqda iyo qoraaga webka Saxiiib jimcaale dadka singelka xaladoda war iga sii yaa warka haayo mala hilmaamay qofkasto war ka haayo iso gudbiya waad mahadsantihin kuligin
wcs waad salaamantihiin asxabta, dadka singelka kaliya mahane hataa dadki 2da sano wax aqbaar ah yaa kahaayo diidmaa wali dadka lasiinayaa waliba baryahaan aad ayeey dadka usiinayaan diidmada
ma gabade says:
@ hassan @ zaynab ;;;;;;waar dadakaan miyaysan miyir qabin waxaa laga hadlaayo miyayasan ka sayn wax kaleeto ayaa u cad jiritaankooda sidiii oo loo baabi in lahaa ayaa loo codeyay cunsuriyiinta oo guulesteen markasay wax kaleto ka hadalaayaan nacladbaa idinku dhacdey idinka iyo sigalkiina iyo laba sanodiina qurunyahay waxa ha soo qorino
Maga bade sxb waad xasuunsan tahaye allah cafimaad haki siiyo
Qofka dadka aflagaadeynaayo, isku xishoow Ilaaheyne ka cabso, dambi ayaa ku sugan in aad dad walaalahaa oo islaam eh naclado.
m gabade meel kalaad kacareesantahaye anaga hanagu soo qaraar bixin caradaada ladhimo.
May 30, 2014 at 15:46
Kaas jaahilka ah waxba hala hadlina hadalkiinana haku khasaarinina, jaahilnimaa ka yeedhsiinaysa wax wa;ba Nacdashuna isagay kor taalaa uu dadka Muslimiinyta ah iska nacdalay, xaasid wadal makhruuq waaaye, meelahaas la aad waa nacdalantahay bulshada hagaagsan ilaahay kaa dhex qabaye.